फोर जी सेवा गुणस्तरीय बनाउँदै टेलिकम : कल ट्यापिङ हल्ला मात्रै | Sunaulo Nepal
शनिबार, ७ जेष्ठ २०७९
फोर जी सेवा गुणस्तरीय बनाउँदै टेलिकम : कल ट्यापिङ हल्ला मात्रै
मंगलबार, २२ भाद्र २०७८
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले फोर जी सेवालाई अझै गुणस्तरीय बनाउने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा गरेर नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले टेलिकमको फोर जी सेवालाई अझ गुणस्तरीय बनाउने बताएका हुन् ।
उनले फाइभ जी सेवालाई परिक्षणमा लैजाने प्रक्रिया आरम्भ गर्ने पनि बताऐ । प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले देशभरको फाइबर बिच्छ्याउने कामलाई तीव्रता दिने पनि उल्लेख गरे । आगामी दिनमा कोरोना संक्रमणका कारण टेलिकमको काम नरोकिने पनि उहाँले स्पष्ट पारे ।
प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले टेलिकमले कल ट्यापिङ गर्ने हल्ला भएको भन्दै हल्लाको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गरे । टेलिकमसँग कल ट्यापिङ गर्ने उपकरण नै नभएको उल्लेख गर्दै उनले टेलिकमले कल ट्यापिङ नगरेको बताऐ ।
उनले टेलिकमले सस्तो, गुणस्तरीय सेवा देशभरका सम्पूर्ण भेगमा पु¥याउने दायित्वको साथ काम गरिरहेको बताए ।
चौधरी ग्रुपले ल्यायो नेपालमा विश्व प्रसिद्ध उपभोक्ता उपकरण ब्रान्ड “माइडिया”
हुम्लामा तीन दिनदेखि अवरुद्ध भएको टेलिफोन र इन्टरनेट सुचारु
देशव्यापी बन्द हुने भनिएको इन्टरनेट सेवा बन्द नहुने
यसरी लुकाउनुहोस् फेसबुक र इन्स्‍टाग्राम पोस्टमा आउने लाइक
ललितपुरको महालक्ष्मीमा मेयर एमाले र उपमेयर कांग्रेस विजयी
तुलसीपुरमा एमाले र कांग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा, खड्का ७१ मतले अघि
वडा सदस्यदेखि महानगरका मेयरको तलब कति?
काठमाडौंमा बालेनको अग्रता झनै बढ्यो, केशव र सिर्जनाको मतान्तर ११३
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर दुबैमा महिला विजयी
रेनुले थप बढाइन अग्रता, विजय र जगन्नाथको कति ?
पोखरामा ८० हजार १५४ मत गणना सकियो, धनराजले कति ल्याए ?
गुमानसिंह अर्यालः प्रधानपञ्चदेखि मेयरसम्म
६८४ स्थानीय तहको नतिजा घोषणा, ३ सय बढी पालिकामा कांग्रेसको कब्जा
आज चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना, भोली पनि बर्षा